Majiraan dhimasho cusub sababo laxiriira dhibaatooyinka COVID-19 oo ay soo werisay Waaxda Caafimaadk | KWIT
Somali News 12.21.2020
In kasta oo aan dhimasho lagu darin Iowa maanta, haddana saraakiisha caafimaadka Axaddii waxay diiwaan geliyeen 138 kale oo dhimasho ah.
Waxay sheegeen inuu jiro dib udhac u dhexeeya qofka markuu dhinto iyo marka la soo sheego. Toddobaadkii la soo dhaafey, Iowa waxay soo werineysay celcelis ahaan ku dhowaad 46 dhimasho maalin kasta.
Tirooyinkii ugu dambeeyay ayaa sii waday inay ka soo fiicnaadaan Nebraska Axadii iyada oo tirada isbitaalada la dhigey ay ka hooseeyaan 600.
Tiradaasi si isdaba joog ah ayey hoos ugu dhacday tan iyo markii ay diiwaan gelisay ilaa 1000 bil ka hor. Laakiin, waxay weli ka sii badan tahay 2.5 jeer wixii ay ahayd Oktoobar 1.
Waqtigaan la joogo, 14% sariiraha isbitaalada gobolka waxaa degan bukaanada coronavirus. Haddii celceliska toddobada maalmood ee celceliska tiradaasi uu ka hooseeyo 15%, gobolku wuxuu sii nasan karaa xayiraadaha fogeynta bulshada.
Tirada kiisaska COVID-19 ee South Dakota labadii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa sii waday inay hoos u dhacdo marka loo eego waddanka intiisa kale, in kasta oo tirada dhimashada gobolka ay wali tahay mid sarreysa qofkiiba.
Gobolku wuxuu ku daray 20 dhimasho dheeraad ah Isniinta isugeyn dhimashada 1,381, oo ay kujiraan 30 gobolka County.